७ जीवन बीमा कम्पनीद्धारा साढे ४ अर्बको आईपीओ निष्काशनको तयारी, कुनको कति कित्ता? - जन आवाज
७ जीवन बीमा कम्पनीद्धारा साढे ४ अर्बको आईपीओ निष्काशनको तयारी, कुनको कति कित्ता?
७ नयाँ जीवन बीमा कम्पनी साधारण शेयर ९आईपीओ० निष्काशन प्रक्रियामा रहेका छन् । उक्त सात जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४ अर्ब ३९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ३९ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।
सिटिजन, आईएमई, सानिमा, रिलायबल, महालक्ष्मी, सन नेपाल र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेका हुन् । आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका ७ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले ७५ करोड रूपैयाँ बराबरको ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
हाल संस्थापकबाट ७० परतिशत अर्थात एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्काशन पश्चात २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुग्नेछ । यसैगरी युनियन लाइफले पनि ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आइपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । अन्य बाँकी पाँच जीवन बीमा कम्पनीहरु रिलायबल, सन नेपाल, आइएमई, महालक्ष्मी र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले समान ६०/६० करोड रुपैयाँको ६०/६० लाख कित्ताका दरले कुल ३ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा छन् ।